မြန်မာ့လက်ရက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ တရုတ်ဈေးကွက်ကိုယှဉ်ပြိုင်ကြရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မြန်မာ့လက်ရက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ တရုတ်ဈေးကွက်ကိုယှဉ်ပြိုင်ကြရအောင်
Posted by etone on Jul 7, 2011 in Arts & Humanities, Business & Economics, Jobs & Careers, Opinions & Discussion | 17 comments
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ အရင်းမြစ်တွေ ပေါများပါလျှက်နဲ့ …. ဈေးကွက်ရှာဖွေမှူ အားနည်းနေတဲ့ အချို့ ပစ္စည်းလေးတွေ ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်… ပြည်တွင်း လည်ပတ်နေတဲ့ ပစ္စည်းများထဲမှာတောင် ကိုယ့်နိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ လက်မှူ ပစ္စည်းများအပေါ် သုံးစွဲခြင်း အားနည်းတာလည်း တွေ့ရပါတယ် … ။ ဈေးပေါပေါနဲ့ ၀င်ရောက်လာတဲ့ တရုတ်ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာ့လက်မှူပစ္စည်းတချို့ နေရာမှာ အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းဖြစ်လုပ်ငန်းအမျိုးစား တချို့ …. လည်ပတ်နိုင်မှူ အားနည်းလာတာ တွေ့ရပါတယ် … ။ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပါဦး …. ။ အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး .. လက်နဲ့ ရက်ထားတဲ့ တောင်းလေးတွေပါပဲ … ။ ကျွန်မတို့ ဆီမှာလည်း ဒီလို တောင်းလေးတွေ လုပ်နိုင်တာမို့ အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တာပါ … အခုတောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပါ ဘယ်နိုင်ငံက ထုတ်တာ ထင်ပါသလဲ … ပြည်တွင်းက ထုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး … တရုတ်ဈေးကွက်ထဲက ရလာတာလေးတွေပါ … ။ ၀ါးအမျှင် မထွက်အောင် သေသေသပ်သပ်လုပ်ထားတာကလွဲလို့ ကျွန်မတို့ မြန်မာ့လက်ဖြစ်ထည်တွေနဲ့ ချွတ်စွပ်တူပါတယ် ။ တရုတ်တွေ export လုပ်တဲ့ ဒီလိုတောင်းလေးတွေကို ကျွန်မတို့နိုင်ငံထဲက လက်မှူ ပညာတတ်သူတွေရော သေသေသပ်သပ် မလုပ်နိုင်ဘူးလား … ။ ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်… ။ကျွန်မတို့ ပြည်တွင်းမှာတောင် အသုံးနည်းနေတဲ့ လက်မှူပစ္စည်းတချို့ကို တရုတ်က export ပို့နိုင်တာ သူ့ရဲ့ ဈေးကွက်ရှာနိုင်စွမ်းအား၊ အရည်သွေးနဲ့ … ပစ္စည်းတန်ဖိုးတို့ပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးက ပြည်တွင်းမှာ အလွန်ဆုံး လေး ငါးရာ ထက်မပိုပါဘူး (ကျွန်မ နေရာတချို့ကို သွားစုံစမ်းပြီးပြီမို့ပါ ) ။ လေးငါးရာဆိုတာ တလုံးချင်း နှစ်လုံးချင်း ဈေးနှုန်းပါ … ။အော်ဒါ ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ အထက် ဆိုလျှင် ဈေးပိုသက်သာမယ်လို့ ပြောပါတယ်… ။ ကျွန်မမှာသာ ရာဂဏန်း ၊ ထောင်ဂဏန်းအော်ဒါတွေ ရှိမယ်ဆိုလျှင် … ကောင်းကောင်း လုပ်လို့ ရမဲ့ ဘစ်ဇနက်မျိုးပါပဲ …ကြားရတာ ၀မ်းသာစရာပါ … ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ FOB ရောင်းဈေးက တရုတ်ဈေးကွက်ကို ယှဉ်လို့ရပါပြီ ။ တရုတ်ဈေးကွက်ထဲမှာ ဒီပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံးက 0.70 USD ၀န်းကျင် မို့လို့ … ကျွန်မတို့ ရောင်းဈေးနဲ့ ယှဉ်လျှင် ဘာလို့ မလိုက်နိုင်ရမှာလဲ … ။ ကျွန်မတို့ လက်မှူပစ္စည်းလေးတွေလည်း ဈေးကွက်ထဲ ထိုးဖောက်နိုင်တာမို့လို့ …. အနောက်နိုင်ငံက မားကတ်ထဲဝင်လေ့လာခဲ့ပါတယ် …. ။ အော်ဒါပေးမဲ့ final customer နဲ့ အဆက်သွယ်ရပါပြီ …. တရုတ်ဈေးကွက်အောက်ဈေးကနေ အရည်သွေးတူတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ပို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုလျှင် ကျွန်မတို့ လက်မှူပစ္စည်းလည်း ဈေးကွက်ထဲ ၀င်ဖိုက်လို့ ရမှာပါ … ။
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ … တချို့ လူတွေ နိုင်ငံခြားဆို အရမ်းအထင်ကြီးတယ် …ကားစီးတာတောင် နိုင်ငံခြားသား စီးလျှင် ပိုက်ဆံပိုတောင်းချင်တယ် … ။ ဒါက ပုံသေနည်းလိုဖြစ်နေလို့ … ဒီပစ္စည်းတွေ နိုင်ငံခြားပို့တာနဲ့ မူရင်းဈေးထက် လေးငါးဆ ပိုတက်မယ်လို့ တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ် … အဲ့ဒါမျိုးဆို အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … ။ ယှဉ်ပြိုင်ရမဲ့ ပစ္စည်းမရှိလျှင်တော့ မျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်နိုင်ပေမဲ့ … ထိုးနှက်ရမှာက တရုတ်က ဈေးကွက်ကိုပါ …။ တချို့ အသက်ကြီးသူတွေ ၊ နယ်တွေမှာ ဆို တောင်းလေးတွေ ရက်ကြတယ် … ပလုံးလေးတွေ ရက်ကြတယ်…အိမ်တွင်းစီးပွားပါပဲ …. ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာတောင် ဒီလောက်ကြီး ရောင်းမကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းမျိုး ရေရှည် စီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုလျှင် စိတ်ဝင်စားလာကြမှာပါ ။ ဒီလို လက်မှူ လုပ်ငန်းမျိုး လုပ်နိုင်တဲ့ လူရှိလျှင် ဆက်သွယ်ပေးပါ … ။ အချိန်မှီ ပစ္စည်းပေးနိုင်ဖို့ စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ လုပ်နိုင်ရပါမယ်… သိတဲ့ အတိုင်းလေ ကျွန်မတို့ လူမျိုးက တခုခု တချိန်ချိန်မှာ ရရမယ် ပြောထားပြီး ဆောရီးဆိုတာမျိုး လုပ်တတ်လို့ … ဈေးကွက်ထဲ ပျံ့နှံ့ ဖို့ … ကြို ကာကွယ်တဲ့သဘောပါ … ။ ပစ္စည်း လုပ်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ် … ကျွန်မဆီကို မေးလ်ပို့ပြီး ဆက်သွယ်ပါ ။ etone.mandalaygazette@gmail.com
မနည်းကို အက်ဒစ်လုပ်လိုက်ရတယ်ပုံတွေ အကြီးကြီး ပြချင်လွန်းလို့ပါ … ။ ဗျို့ သဂျီး ကြော်ငြာလို့ ထင်လျှင် ပွိုင့်မတိုးပါနဲ့ ။
မြန်မာတွေ ပါးစပ်ကပဲ မကျေနပ်ဘူး မတရားဘူးအော်နေမဲ့အစား ကိုယ့်ဈေးကွက်ဖြစ်အောင် ပြန်ယူပါ
လောလောဆယ်လုပ်တတ်တဲ့သူ အဆက်အသွယ်မရှိသေးပေမဲ့ တွေ့လာရင် ဆက်သွယ်ပါမယ်
etone တကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်အောင်သာလုပ်ပါ အားပေးပါတယ် ..
ပြည်တွင်း လက်ဖြစ်တွေက လက်ရာကြမ်းတာများတယ် ဒါကြောင့် အလိုလို အထင်မကြီးတော့ပဲ ဈေးကွက် မရတော့တာဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်မိတယ်။ တရုတ်က လာတာ ဆိုတော့ သူတို့လည်း အမြင်လှအောင် သပ်သပ်ယပ်ယပ် လုပ်တာလည်း ပါမယ်။ ဒါနဲ့ ပဲ တိုးလာလာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
နောက်ပိုင်း ခရီးသွား လုပ်ငန်း တိုးတွေ အ၀င်များလာရင်တော့ လက်ရာ သပ်သပ်ယပ်ယပ်နဲ့ လုပ်ရကောင်းမှန်း သိသွားပြီး ဈေးကွက် အမြင်ကျယ်လာပြီး စီးပွားဖြစ် လုပ်လာ ကြလိမ့်မလားပဲ။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းက လူတွေ အတွက်ရောင်းမယ်ဆိုလျှင်တောင် ဒီလောက်အော်ဒါများမှာ မဟုတ်ဘူး … အခု အော်ဒါအများကြီးဝယ်ချင်တဲ့ customer နဲ့ တွေ့ထားလို့ …. တမျိုးကို အနည်းဆုံးဆိုလျှင်တောင် 1000 pcs က စမှာမယ်တဲ့လေ … ။ ကုန်ကြမ်းရော …. လက်မှူပါဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ ပြည်ထဲ …သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်လျှင် ဘာလို့ မလိုက်နိုင်ရမှာလဲနော် … ။ နယ်ဘက်ဆင်းပြီး ရှာပါဦးမယ် … ။
နယ်ဆင်းပြီး မရှာခင်မှာ မျက်မမြင် ကျောင်းမှာ သွားစုံစမ်းကြည့်လိုက်.. သူတို့က ပိုပြီး အနုစိတ်သပ်ယပ်အောင် လုပ်နိုင်တယ်။
ခရီးသွား လုပ်ငန်း တိုးတက်လာမယ် ဆိုရင် အဝေးက လူကို သွားကြေညာစရာ မလိုဘူး။ သူတို့ ပါးစပ်နဲ့ အရပ်တကာ လှည့်ကြေညာပေးလိမ့်မယ်။ အဲဒီ သဘောမျိုးပါ။
နေဦး .. ဟိုနေ့က မန်းလေးသွားလည်တော့ မန်းလေးတောင်က ၀ယ်လာတာ လွယ်လို့ရတဲ့ ကြိမ်အိတ်လေး ၂၅၀၀ ပေးရတယ် … တန်လိုက်တာ မြို့ထဲပိုတန်မလား ဆိုတော့ မြို့ထဲမှာ ဘယ်မှာဝယ်ရမယ်မှန်းမသိဘူး … လှလိုက်တာ ကြိုက်လိုက်တာ အရမ်းပဲ … ဒီလိုမှန်းသိရင် ဒီဇိုင်းစုံဝယ်လာပါတယ်လို့ … ခုထိကိုလိုချင်နေတုန်းပဲ …
ငွေအား နဲ.သာမက နည်းပညာ ပါ ပန်.ပိုးပေးတော.သူတို.လက်မှု
ပစ္စည်းတွေက ကြာရှည်ခံပြီး အရေအသွေးပါတက်လာတယ်
ကျွန်တော်တို.ဆီမှာလဲ လက်မှုပညာ လုပ်ငန်းတွေမှာ စက်မှုနည်းပညာကို
ဒါဆိုရင် အရည်အသွေးတက်လာတဲ.အပြင် အရေအတွက်ပါ များများထွက်လာနိင်မယ်လို.
ထင်တာဘဲ MG ရွာသားတွေ စုပြီးအလုပ်ရုံလေးတခုလောက်ဖွဲ.လုပ်ကြည်.ပါလား
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကအပြန်လမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်းကွေ့ မှတ်တိုင်ပီးတော့
နောက်နှစ်မှတ်တိုင်လောက်မှာ ကြိမ်ထည်ပစ္စည်းတွေ သယ်သယ်လာတာတွေ့ တယ်
ကြိမ်ခြင်းတောင်း (ဆရာမတွေကိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းစုံ) ၊ ကြိမ်ခေါင်းအုံး (တရုတ်တွေသုံးတဲ့ဒီဇိုင်းစုံ)
ကြိမ်ကုလားထိုင်အမျိုးမျိုး၊ ကြိမ်ပိုက်ဆံအိတ်သေးသေး ကြီးကြီးဒီဇိုင်းစုံ တခါတလေ
ဘီဒိုအငယ်စားလေးတွေတောင်ပါသေးတယ်။ တခါကစပ်စုကြည့်တော့ မှတ်တိုင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ကနေ
တည်တည့်ကြီးမြင်ရတဲ့လမ်းလေးထဲမှာ အဲ့ဒါတွေလုပ်တဲ့ ဒိုင်ရှိတယ်တဲ့ ပြန်ရောင်းဖို့ဝယ်လာတာတဲ့
သွားလေ့လာကြည့်ပါလား စိတ်ကူးကောင်း ဈေးကွက်မြင်လို့ အားပေးတာ…
ကြိမ်စက်ရုံတွေ သုံးလေးခု ရောက်ပြီးပါပြီ …သူတို့က အထည်ကြီးတွေပဲ ကိုင်ချင်တာလေ … ကြိမ်ခြင်းထဲမှာ အနည်းဆုံးဈေးက 3.00USD မို့လို့ ဒီလို ၀ါးမျိုးသူတို့ မလုပ်ချင်ကြဘူး ။ အခုဟာက အိမ်မှာလုပ်တဲ့ လူတွေပဲ အဆင်ပြေမှာ … ။ တွေ့ထားတဲ့ ဆိုင်တခုတော့ရှိတယ် … အဲ့ဒါလည်း စုံစမ်းတုန်းမို့လို့ … ။ မုန့်ဟင်းခါး မုန့်ဖတ်တောင်းတွေတောင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရသေးတာပဲ…လုပ်နိုင်မဲ့လူ ရှိတော့ရှိဦးမှာပါ..
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဈေးကွက်က.. ယူအက်စ်ပဲ..။
ဂျပန်ကလည်း အဲဒီလို လက်မှုအနုပညာသဘောရောက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ တော်တော်ထုတ်ပါတယ်..။
အင်မတန်ကို လက်ရာ သေသပ်တယ်..။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြိး(လေ့လာဖူးတာတွေ) သေသေချာချာကို ပြောပြချင်ပါတယ်..။
ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ပြီးပြီးရောလုပ်တာရယ်.. အသေးစိတ်တိတိကျကျ အချိန်ယူလုပ်တာရယ်အကြောင်းတွေကိုပါ..။
US ထိတော့ လက်လှမ်းမမှီသေးဘူး သဂျီးရဲ့ … အခုတွေ့တဲ့ customer က Europe Market ကတွေ့တာပါ … အမြောက်မြားလိုပြီး Easter ပွဲအတွက် အဆောင်ယောင်အနေနဲ့ သုံးမှာပါတဲ့လေ ။
ပုံထဲကဟာတွေလည်း ၀ါးမျှင်တွေ နည်းနည်းတော့ထွက်နေတာပါပဲ… သိပ်အသပ်ရပ်ကြီးမဟုတ်လို့ မြန်မာမျက်စိနဲ့ ယှဉ်ရမယ် ထင်တာနဲ့ တင်လိုက်တာ ။
၀ါးရဲ့ သဘောက ပိုးကိုက်တတ်တယ်လေ.. ပိုးမကိုက်အောင် ပေါင်းရတာမျိုး ရှိတယ်။ သူ့နည်း သူ့ဟန်အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ်မာရာပါပဲ။
စကားမစပ် အခု မုန့်ဟင်းခါးဖတ် လိုက်ပို့တဲ့ တောင်းတွေဆို နီးစပ်တယ်။ သေတော့ မသေသပ်ဘူး။
မုန့်ဟင်းခါးဖတ် လုပ်တဲ့ လူတော့ မသိဘူး ကြိမ်ခြင်းတွေ လုပ်တဲ့ လူတွေတော့ သိတယ်။ နီးစပ်ရာ စုံစမ်းချင်ရင် လမ်းညွန်ပေးမယ်။
အာလူးစားသူ များ ပန်းချီကား ရဲ့ ပုံရိပ်ကို သုံးပြီး
အားလူးကောက်ချင်ရင် ဒီတောင်း နဲ့ ကောက် ဆိုပြီး ကြေငြာလိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့ 
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် ဝါးရင်းတုတ် အချောင်းငါးသိန်း တင်ဒါခေါ်ရန်ရှိသည်။
မှတ်ချက်။ အမေရိကန် ကမ်းတက်တပ်ဖွဲ့များ မရောက်မှီ ဝါးရင်းတုတ်များကို ကကထောက်သို့ အချိန်မှီ ပေးသွင်းနိုင်မှသာ ကျသင့်ငွေ ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံက လက်မှုပစ္စည်းတွေက ခိုင်ခံ့တယ်
ဒါပေမဲ့ လုပ်ချင် ကိုင်ချင်စိတ် ၊ လက်ကြောတင်းတင်း လုပ်ချိန်စိတ် မရှိဘူးလေ ။
export များလုပ်မယ် တွေးလျှင် ဈေးတွေ ထပ်တင်ပါလိမ့်မယ် ဒလီဗာရီကျတော့လည်း အရပ်ထဲမှာလုပ်နေသလိုပဲ ဒီနေ့ မပြီးနောက်နေ့ပေါ့ ၊ နောက်တပတ်ပေါ့ဆိုတာတွေ ရှိလာမယ် ။ ဒီနိုင်ငံမှာသာ အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတာ တခြား နိုင်ငံတွေမှာ ကတိအတိုင်းပို့ရတယ် ပြောတဲ့ရက်မပြီးလျှင် လေယဉ်နဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်ကိုယ့်အိပ်စိုက် ပို့ရတာ ။